Ku Bilow otomaatiga suuqgeynta koorsadaada internetka si aad ugu guuleysato iibsiyo badan oo B2B ah | Martech Zone
Mid ka mid ah siyaabaha ugu faa'iidada badan ee lacag looga sameeyo iyada oo loo marayo a koorsada internetka ama eCourse. Si aad ugu hesho macaamiisha joornaalkaaga oo aad ugu badasho tilmaamahaas iibka, waxaad ku deeqi kartaa webinar internet toos ah ama deg deg ah oo bilaash ah ebook, bogag caddaan ah, ama dhiirigelin kale si aad u hesho macaamiisha B2B ee diyaarka u ah inay iibsadaan.
Bilow Koorsadaada internetka
Hadda oo aad ka fekertay inaad khibraddaada u rogto koorso faa'iido leh oo khadka tooska ah ah, adiga kugu habboon! Koorsooyinka khadka tooska ah ayaa ah mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee loogu gudbiyo rajada iibka qiimo aad u sarreeya. Adoo adeegsanaya aaladaha suuqgeynta otomaatiga ah si aad u sameyso iibkan, waad kordhin kartaa heerka beddelka adiga oo aan kordhin culeyskaaga shaqada.
Go'aaminta waxa la barayo - Markaad cashar bixinayso, tusaale ahaan aaladda otomatiga ee suuqgeynta, waxaa habboon in la baro wax aad jeceshahay ama mid aad khibrad u leedahay.
Go'aami bartilmaameedkaaga - Qof walba ayaa raadinaya taas hal khariidad waddo taasi waxay ka caawin doontaa inay ganacsigooda gaarsiiyaan heerka ku xiga. Hadday tahay shaqsi ama ganacsi, waxay rabaan inay raadiyaan xalka, faa'iidooyinka, iyo natiijooyinka koorsada khadka tooska ahi ku siin karto iyaga. Natiijada aad ku ballanqaaday koorsadaada internetka waa in si cad loo qeexaa si markaas macmiilkaagu uu u gaaro go'aan wax iibsi oo cad.
Isku day inaad u sameyso magac koorsadaada internetka oo wax ka qabta natiijada dhamaadka la doonayo. Tusaale ahaan, haddii natiijada ay u tahay macaamiishaadu inay kordhiyaan beddelaadda iibka. Cinwaan koorso sida "Samee $ 5,000-kaaga ugu horreeya ee iibka wax ka yar hal toddobaad" wuxuu heli doonaa natiijooyin aad uga wanaagsan tan "Sida Loo Kordhiyo Iibinta Ganacsigaaga," tusaale ahaan.
Go'aamiso Dadkaaga - Ma rabtaa inaad u siiso badeecadaada dan gaar ah ama koox dad ah? Macaamiilkaagu ma yahay qof ganacsigooda wata, iyo ganacsatada internetka ama xirfadlayaal kale? Hada waxaa la joogaa waqtigii aad isweydiin laheyd macaamiil noocee ah oo aad rabto inaad kusoo jiidato koorsadaada.
Abuur dulmar maadooyinka iyo mowduucyada qiimaha siinaya macmiilkaaga mustaqbalka - Qaar ka mid ah fikradaha ugu fiican ee koorsooyinka khadka tooska ah waxaa ka mid noqon kara:
U guuritaanka xirfad cusub
Inaad xirfaddaada u qaaddo heerka ku xiga
Kordhinta wax soo saarka iyo hal-abuurka si fudud oo waqti yar
Barashada tikniyoolajiyad cusub sida AI oo aad awood u leedahay inaad hirgeliso oo aad u adeegsato si dhakhso leh oo wax ku ool ah.
Amniga guriga ama ganacsiga oo la kordhiyay.
Kordhinta iibka iyo sicirka beddelka oo la socdo hababka iibka ee la caddeeyey ama sheybaarada.
Qiimo u goynta - Qiimeyn, waad beddeli kartaa xeerarka si aad u daboosho baahiyahaaga. Waxaa laga yaabaa inaad ku hesho qiimo sare macluumaadka qiimaha leh ee aad bixiso oo aad ka hesho natiijooyin wanaagsan. Qaar ka mid ah iibsadayaashu waxay ku siin doonaan jawaab celin aad u wanaagsan haddii aad dejiso qiime ka sarreeya haddii aad ku bixiso wax ka yar. Marwalba waad awoodaa arag waxa suuqa xambaari doono.
Haddii aadan helin jawaabta la doonayo, waxaad had iyo jeer beddeli kartaa qiimahaaga ama sameyn kartaa dalabyo ku soo jiidan kara iibsadayaasha qashinka iibka. Tusaale ahaan, waxaad ku bixin kartaa waxyaabaha 30 maalmood oo bilaash ah ka dibna waxaad ku siin kartaa waxyaabo dheeri ah ama dalab gaar ah qiimaha aad dejisay.
Adkeysiinta Dhinac Walboo Koorsadaada Khadka Tooska ah
Iibinta koorso internetka ah ayaa dhib noqon karta. Dhisida kalsoonida iyo muujinta sababta macaamiil macquul ah ay kugu kalsoon tahay waa muhiim. Markaad bixiso wax qiimo leh sida webinar macluumaad oo bilaash ah, joornaal emayl, eBook, ama warbixin, oo ay ku jiraan macluumaad ficil ah oo iibsaduhu ka heli doono qiimo iyaga.
Inta lagu jiro diiwaangelinta bilowga ah, waad awoodi kartaa Macaamiisha sahaminta si loo ogaado waxa ay aadka u xiiseynayaan isla markaana loo shakhsiyeeyo khibradooda oo dhan inta lagu jiro iyo ka dib koorsada. Waxaa jira dhowr qalab oo dabagal ah oo emayl ah oo la heli karo kuwaas oo awoodi kara shaqooyinka sida la socoshada xiriirada emailkaaga. Waad abuuri kartaa foom saxiix deg deg ah oo awood u siinaya inay galaan ma aha oo kaliya cinwaanka emaylkooda laakiin sidoo kale magacooda iyo meelaha gaarka ah ee ay xiiseynayaan.
Casri ah emaylka dabagalka qalabka otomaatiga, tusaale ahaan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dirto emayl soo dhaweyn ah oo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan koorsadaada khadka tooska ah iyo bixinta alaabooyin dheeri ah oo la xiriira si ay kuugu hayso xagga hore iyo maskaxda macaamiisha mustaqbalka. Adiga oo bartilmaameedsanaya suuqaaga, waxaad sidoo kale abuuri kartaa kalsooni heer ah in macaamiisha hadda iyo kuwii hore ay dami doonaan ereyga ku saabsan waxa aad bixiso.
Qalabka dabagalka ah ayaa kaa caawin kara inaad iskaa u furto iibkaaga iyo kooxaha suuqgeynta si aad ula soo baxdo waxyaabo dheeraad ah iyo ololeyaal isla markaana aad diirada saartid dadaalada iibka dhabta ah ee ay suurtagal tahay iyo macaamiisha hadda jirta inay ka jawaabi doonaan oo ay sii kordhin doonaan iibintaada.
Otomaatig kobcin kara ganacsigaaga isla markaana kordhin kara iibka koorsada khadka tooska ah
Liiska emailkaagu waa mid ka mid ah hantida ugu qiimaha iyo awoodda badan ee aad u leedahay suuq-geynta koorsadaada internetka, xiritaanka iibka, iyo kobcinta ganacsigaaga. Dhis emaylkaaga Liis garee adoo abuuraya magnet Lead ah kaas oo ka heli doona macaamiisha mustaqbalka inay ku siiyaan cinwaanka emaylkooda.
Adiga oo siinaya qiime dhab ah waxyaabahaaga bilaashka ah waxay ka dhigeysaa inay u badan tahay inay ku siiyaan macluumaadka emaylkooda si aad u siiso xitaa wax badan oo ka mid ah waxa aad bixiso oo aad ku hoggaamiso iyaga inta loo maro iibka iibka iyo heerka sarrifka sare ee:
Sheekooyinka guusha ee kuwa kale ee iibsaday koorsadaada iyo natiijooyinka ay ku heleen qaadashadooda.
Si cad u qeexida natiijooyinka koorsada ee iibsadahaaga mustaqbalka uu filan karo markay qaataan koorsadaada internetka.
Qiimeyn gaar ah, dhacdooyin, ama dalabyo kale oo iyaga ku sii dhiirrigelin kara iyaga inay qaataan go'aan wax iibsi.
Ku Saabsan La Soco Fred
Follow Up Fred waa fidinta chrome oo otomaatig u noqon doonta u dirista emayl xasuusin ah qof aan kuu soo jawaabin. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad daartaa oo aad u ogolaataa Follow Up Fred inuu ku qabto shaqada adag oo dhan oo marka qof uu dabagal ku sameeyo markaa aad jawaab ka bixiso oo aad hal talaabo u dhow iibka.
Saxeex u raac Follow Follow Fred si bilaash ah
Tags: fariinta suuq-geynta suuqadabagaldabagal fredraacayoemaylka iibka
EDO: Cabirka Ka-Qaybgalka Macaamiisha ee Xayeysiinta TV-ga